Jaljala Online – Jaljala Online
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आधारभूत काम यही वर्षको अन्त्यमा पूरा गरेर आगामी वर्षको सुरुमा उपत्यकामा पानी वितरण गरिने उनको भनाइ छ। यसको दोस्रो […]
Posted on May 29, 2020 May 29, 2020 Author Jaljala Online	Comment(0)
१६ जेठ, काठमाडौं । भारतले नेपालसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि ‘भरोसापूर्ण वातावरण’ भएमात्र वार्ता गर्न सकिने बताएको छ । नेपालका अधिकारीहरुले सीमा वार्ता गर्न भारत तयार नभएको भनिरहेका बेला भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट पछिल्लो धारणा सार्वजनिक भएको हो । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भारत सबै छिमेकीसँग वार्ता गर्न तयार रहेको […]
भारतमा सी’मा वि’वादले थप सं’कट निम्त्याएको छ । छिमेकी मुलुक चीनले अत्यन्तै शक्तिशाली सैनिकहरु हज्जारौको संख्यामा सी’मा क्षेत्र पठाएपछि भारत आ’त्तिएको छ । उसलेपनि सैनिक शक्ति बढाएको त्यहाँका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । यसले भारत–चीनबीच यु द्धको कालो बादल मडारिएको छ । दुवै देशका सञ्चारमाध्यमहरुपनि एक अर्कावि’रुद्ध खनिन थालेका छन् । सम्भावित त’नावलाई दृष्टिगत गरी […]
जेठ १६ गते शुक्रबार ई. स. २०२० मे २९ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य,, वि.सं.२०७७ जेठ- १६, शुक्रवार,ई.सं.२०२० मे -२९, शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४० तछलाथ्व,प्रमादी,उत्तरायण,ग्रीष्म,ज्येष्ठ शुक्लपक्ष तिथि -सप्तमी , १९:१४ बजे उप्रान्त अष्टमी,नक्षत्र-मघा , २७:५० बजे उप्रान्त पूर्वफाल्गुनी,योग-व्याघात , २०:२६ बजे उप्रान्त हर्षण,करण-गर ०८:१० बजेदेखि वणिज , १९:१४ बजे उप्रान्त कौलव, चन्द्रराशि-सिंह,आनन्दादि योग-काण, सूर्योदय-५:११, सूर्यास्त-१८:५२ ,दिनमान-३४ […]
काठमाडौं। भारतले नेपाली भूमि मि’चेर सडक निर्माण गरेपछि चर्चामा आएको दार्चुलाको छाङरुमा नेपाली सेनाले पनि टोली पठाएको छ । कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतले अतिक्रमण गरेका बेला जंगीअड्डा मौन बसेको भन्दै आ’लोचना हुन थालेपछि सेनाले पनि छाङरुमा फौज पठाएको हो । यसअघि बुधबार सशस्त्र प्रहरी बलले छाङरुमा बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) स्थापना गरिसकेको छ । सेनाको […]
हे भगवान अब के होला ? ची?नले यति धेरै सै,निक भारतको सी,मामा पठायो
एजेन्सी । भारतमा सीमा विवादले थप संकट निम्त्याएको छ । छिमेकी मुलुक चीनले अत्यन्तै शक्तिशाली सैनिकहरु हज्जारौको संख्यामा सीमा क्षेत्र पठाएपछि भारत आत्तिएको छ । उसलेपनि सैनिक शक्ति बढाएको त्यहाँका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । यसले भारत–चीनबीच यु द्धको कालो बादल मडारिएको छ । दुवै देशका सञ्चारमाध्यमहरुपनि एक अर्काविरुद्ध खनिन थालेका छन् । सम्भावित तनावलाई […]
काठमाडौं । जाजरकोटमा प्रेमीका लिन गएका नवराजको गाउँलेको लखेटाईवाट निधन भयो । नवराजको आमाले युवतीको पेटमा आफ्नो छोराको बच्चा रहेको दावी गरेकी छन् । उनले छोरा र ति युवतीको कुरा फोनमा भएको सुनेको र त्यतीवेला युवतीले मेरो पेटमा बच्चा छ, आमा बुवाले अन्तै विवाह गरिदिन लागे लिन आउ भनेर भनेको सुनेको नवराजको आमाको दावी छ […]